Olympiade des métiers : i SOLOHARINIANA Larissa no nibata ny amboara – METFP
Olympiade des métiers : i SOLOHARINIANA Larissa no nibata ny amboara
Ny faritry Vakinankaratra, izay nosoloin-dRamatoakely SOLOHARINIANA Larissa tena, avy ao amin’ny CFP Atsirabe no nisalotra ny laharana voalohany tamin’ny « olympiade des métiers ». Izy noho izany no solontenan’i Madagasikara amin’ny fifaninanana WorldSkills 2022.
Akanjo mianjaika, hoentina amin’ny lanonana fankalazana ny fetim-pirenena 26 jona no lohahevitra nifaninanana tamin’izany. Ny zaitra sy ny haingo ary ny famoronana no sehatr’asa fahatelo handraisan’i Madagascar anjara amin’ny « Olympiade des métiers ».
Rehefa nanomana izany nandritry ny atelona izy sivy mianadahy, dia tonga ny fotoana farany nampisehoana izany ampahabehimaso tetsy amin’ny Carlton Anosy ny sabotsy 19 martsa.
Tonga nanome voninahitra ny lanonana Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana. « Reharehan’ny firenena ianareo, ary Varavarana misokatra izao fahaizanareo izao ho amin’ny asa mahavelona sy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenana », hoy ny lahateniny
» Olo-mahay raha, tsy very mandeha »
©️ SCOM METFP /Mars 2022